बिष्णु माया रुदै भन्छिन- म देखि टाढा नजा ल भन्नु भएको थियो मलाई नै छो’डेर जानु भयो ! – Khabarhouse
बिष्णु माया रुदै भन्छिन- म देखि टाढा नजा ल भन्नु भएको थियो मलाई नै छो’डेर जानु भयो !
Khabar house | २३ माघ २०७६, बिहीबार १६:२६ | Comments
२३ माघ २०७६, बिहीबार काठमान्डौ : बुवा र आमा दुवै जनालाई घाँटीको क्यान्सर भएपछी रुदै भिड्यो लाइभ गरेकी बिष्णु माया लोकी आमाको नि’धन भएको छ । कमजोर आर्थिक अबस्था भएकी उनको आमा बाबाको उपचार गर्न आ र्थिक अ’भाब भए पछी रुदै भिडियो लाइभ गरेकी थिइन । उनको उपचार कै क्रममा नि’धन भएको हो ।
बिष्णुको भिडियो हेरेर सामाजिक अभियन्ताहरु आर्थिक संकलनमा जुटिरहेका थिए भने केहिले आर्थिक सहयोग समेत गरेका थिए । आमालाइ गु’माएकी बिष्णु भा’बविवल बनेकी छन। आमालाई गु’माएकी बिष्णु माया रुदै भन्छिन आमाले मलाई नानु म देखि टाढा नजा ल भन्नु भएको थियो तर मलाई नै छोडेर जानु भयो ।
आमाले मलाई धेरै माया गर्नु हुन्थ्यो अव मलाई कसले माया गर्छ आखा भरि आशु पार्दै विष्णुले भनिन । मैले कति दुख गरेकी थिए आमालाई ब’चाउनको लागी । सहयोग लिएर अस्पताल पुगेका भाग्य न्यौपानेका अनुसार बिष्णु मायाकी आमाको उपचार कै क्रममा नि’धन भएको हो ।भाग्य भन्छन जसलाई म ब’चाउन आए उसलाई आखि अगाडी गु’माउनु पर्यो ।